Fanadihadiana Ulefone Armor, rehetra manodidina ny € 150 | Androidsis
Na dia ny ankamaroan'ny olona aza dia mihevitra ny lafiny hatsarana rehefa mividy modely finday iray na hafa, tsy izany no izy amin'ny karazana vokatra atolotray amin'ity fotoana ity. ny Ulefone Armor dia finday avo lenta izay mahafeno ny fenitra iraisam-pirenena IP68 ary inona no miaraka vidiny ambany kely noho ny 150 € Azo antoka fa misy ny akany amin'ity sehatry ny mpampiasa matihanina ity izay isan'andro no tadiavina. Andao hojerentsika amin'ny antsipiriany ny toetra mampiavaka an'io smartphone tsy lavitra.
1 Tsy maninona ny famolavolana
2 Ny toetra ara-teknikan'ny Armour Ulefone
3 Vidiny ary aiza no hividianana ny Ulefone Armour
6 Ulefone Armour Photo Gallery
Araka ny hitanao raha vao jerena, ny Ulefone Armor dia tsy terminal tsara tarehy, natao tsara, manify ary maivana. Dia a Smartphone mifono vy hanoherana ny rano, vovoka ary fikororohana miaraka amin'ny antoka feno, ka ny famolavolana dia zavatra mazava tsara fa ity fitaovana ity (sy ny faritra rehetra amin'ny ankapobeny) atokana. Ny refy sy ny lanjany dia malala-tanana ary mandeha amin'ny 148.9 X 75.8 X 12.5 milimetatra milanja 195 grama.
Ao anatiny dia manana bateria 3.500 mAh mamela a fizakantena ampy ho an'ny andro fiasana feno amin'ny fampiasana feno.
Ny fitaovana anaovana azy dia mahatohitra sy matanjaka, ampy tsy hijaly amin'ny karazana fianjerana, kapoka na rehefa tototry ny rano na fasika. Ny efijery koa dia misy eo alohany Corning Gorilla Glass.
Ny toetra ara-teknikan'ny Armour Ulefone
Ny Armour Ulefone dia a smartphone finday avo lenta ary noho izany dia tsy maintsy manolotra fahombiazana sy fampiasa mifanaraka amin'izany. Tonga miaraka amin'ny efijery 4,7-inch sy ny vahaolana HD 720p. Ao anatiny dia manana Mpikirakira MediaTek 6753 miaraka amina processeur 8 GHz 1.3-core, RAM 3 GB, fitehirizana 32 GB azo ampitomboina miaraka amin'ny karatra microSD, fakan-tsary 13 megapixel main flash ary flash LED ary tselatra faharoa 5 megapixel, ary koa rafitra fiasa Android 6.0 Marshmallow. Tsy ratsy amin'ny haavon'ny fampisehoana izy io, na dia tsy azonay aza fa misy mpamindra maoderina somary maoderina kokoa toa ny MediaTek Helio P10 (MT6755) izay mahomby kokoa.
Amin'ny haavon'ny fifandraisana, miaraka amin'ny LTE, fanohanana SIM roa mihetsika, WiFi 802.11 a / b / g / n, Bluetooth 4.0 LE ary aGPS miaraka amin'ny fanohanan'ny GLONASS. Izy io koa dia manana Radio FM, NFC, ary bokotra vonjy taitra izay mety ho tena ilain'ny atleta matihanina na mahery setra raha sendra fihemorana.
Vidiny ary aiza no hividianana ny Ulefone Armour
Araka ny efa nolazainay tamin'ny fiandohan'ny fanadihadiana, ny Ulefone Armor dia misy amin'ny vidiny mahaliana amin'ny € 148 fotsiny y azonao atao ny mividy azy amin'ny fipihana eto. Izy io dia terminal izay manolotra a sandam-bola be ary natao ho an'ireo mpampiasa matihanina miasa amin'ny toe-javatra faran'izay mafy na ho an'ireo atleta mampihetsi-po izay mila finday avo lenta afaka mahazaka nefa tsy simba.
Somary antitra ilay mpanera
Ny kalitaon'ny efijery dia azo hatsaraina
Ulefone Armour Photo Gallery
Ao amin'ny galeriana manaraka dia azonao atao ny mahita ny antsipirian'ny Ulefone Armor.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Ulefone » Fandinihana Ulefone Armor, manodidina ny latsaky ny € 150